Global Voices teny Malagasy » Firenena Latsaka An-katerena Mandritra ny 30 Andro Ny Vondro-Nosy Maldives, Mihantona Ny Zo Fototra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2015 16:19 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Maldiva, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Mpanao fihetsiketsehana manofahofa saina ao amin'ny kianjam-bahoaka ao Malé mitaky fifidianana vaovao nandritra ny krizy ara-politika 2011-2012 tao Maldives. Sary avy amin'i Mohamed Muha. Copyright Demotix
Tamin'ny volana Novambra teo amin'ny mitataovovonana tao Maldives (07:00 GMT), nanambara ny firenena ho latsaka an-katerena 30 andro  ny governemanta ao amin'ity fanjakana nosy kely ity, noho ny fandrahonana ny fiarovam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka no antony voalaza. Nivoaka ny fanambarana  rehefa nahita fitaovana mety mipoaka tampoka maromaro (IEDs) sy fitaovam-piadiana tao amin'ny toerana samihafa tao an-drenivohitra Malé ny mpitandro ny filaminana .
Tsy hisy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, saingy miato kosa ny fahalalahana hamory olona, ny zo hanana fiainana manokana, ny zo hitokona, ireo zo manoloana ny fisamborana sy ny fanagadrana, ny fahafahana tsy ho savasavaina sy anaovana fanagiazana ary koa ireo zo hafa sasany. Araka ny tatitry ny gazety UK the Guardian , nangina ny araben'i Malé taorian'ny fanambarana, ary voahodidina miaramila ny orinasa mpamokatra rano sy herinaratra. Maro ny olona voasambotra nandritra ny fisafoana.
Voaràra ao Maldives ao anatin'ny firenena latsaka an-katerena ny fihetsiketsehana, ny fitokonana, zo manoloana ny fisamborana, zo hanana fiainana manokana sy ny fahafahana hivezivezy.
Manome vaovao farany momba ny toe-draharaha ny bilaogy mitantara mivantana ao amin'ny Maldives Independent.
Namoaka fanambarana  tao amin'ny tranokalany ny filoha lefitry ny firenena, izay ao anatin'ny andro faha-11 tsy mahazo mihetsika mivoaka ny fonja ao Dhonidhoo, nilaza ny ahiahiny momba ny toe-draharaha ara-piarovana izy ary nilaza fa hanimba ny hoavin'ny toekarena ao amin'ny firenena ny filazana ny firenena ho latsaka an-katerena
Nanohina ny maro ny vaovao.
Firenena latsaka an-katerena ao amin'ny Paradisa. Manambara firenena latsaka an-katerena mandritra ny 30 andro manomboka androany amin'ny 12 atoandro ny filohan'i Maldives
Milaza ny mpitandro ny filaminana ao Maldives fa nahita zavatra heverina fa baomba tao anaty fiara nijanona teo akaikin'ny orinasan'ny herinaratra sy rano.
Ahoana ny fiantraikan'izany ao Maldives noho izy toeram-pizahantany malaza? Hoy ny filazan'ny kaonty Twitter ofisialin'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny:
Na dia teo aza ny Firenena latsaka an-katerena, milamina sy ara-dalàna ny toe-draharaha ao Maldives. Tsy misy ny famerana ho an'ny mpitsidika handeha ho ao Maldives
Nikasa hanao fihetsiketsehana goavana ao an-drenivohitra antsoina hoe ‘Minjuvaan  ny mpanohitra voalohany Antoko Demokratika Maldiviana (MDP) amin'ny Zoma 6 Novambra. Any am-ponja ny filoha teo aloha Mohamed Rasheed , filohan'ny MDP taorian'ny fiampangana azy  tamin'ny volana Martsa teo ambanin'ny lalàna manohitra ny fampihorohoroana. Hanome fahefana mihoa-pampana ho an'ny mpitandro ny filaminana ny firenena latsaka an-katerena mba hisambotra ireo olona ahiahiana alohan'ny fihetsiketsehana anti-governemanta .
Nanomboka teraka tao amin'ny firenena ny disadisa taorian'ny fipoahana tao amin'ny sambo mandeha motera an'ny Filoha Abdulla Yameen tamin'ny Septambra 28, izay namparatra ny vadiny sy ny olona roa hafa. Tsy naninona i Yameen satria tsy nipetraka tao amin'ny toerana mahazatra azy ao anatin'ilay sambo. Vao haingana ny FBI no nanohitra ny fanadihadian'ny mpanao famotorona hafa ary nilaza  fa tsy nahita porofo izy ireo amin'ny fisian'ny fipoahana tao amin'ny sambon'ny filoha.
Saingy miziriziry ny manampahefana ao Maldives fa fikasana hifofo ny ain'ny filoha izany. Nogadrain'ny filoha Yameen ny filoha lefitra Ahmed Adeeb tamin'ny Oktobra 24 noho izy ahiahiana ho tafiditra tamin’ ny fipoahana rehefa niampanga azy ho “namadika tanindrazana”.
Mbola misalasala ny olona. Mpanoratra Yameen Rasheed nisioka hoe:
Tokony ahafantatra momba an'i Maldives ireo mpanara-baovao vahiny: 1) Mbola tsy nisy ny IED (fitaovana mety hipoaka tampoka). Krizin'ny orinasa mpamokatra izany. Tsy mbola nisy demokrasia mihitsy [teto]
Nanoratra tao amin'ny Facebook mikasika ny fiantraikan'ny firenena latsaka an-katerena eo amin'ny zon'ny vahoaka ao Maldives i Saina Saeed  :
Na dia nambara ho fepetram-pitandremana mety isian'ny fipoahana baomba na koa noho ny fikasana hanatontosa fihetsiketsehana aza ny fametrahana ny firenena ho latsaka an-katerena, dia voahitsakitsaka ny zonay ary mampalahelo fa tsy misy ny andrim-panjakana azonay itodihana hisian'ny fitondrana ara-drariny na dia te hanohitra mafy izany aza izahay. Tsy zavatra natao hovazivaziana izany #‎knowyourrights‬ (fantaro ny zonao)
Raha nitaraina kosa i Zaeem Ahmed :
Tsy manana mpitarika mitsinjo lavitra manana fahavononana tsara sy ny soa iombonana isika. Izany no antony mahatonga antsika ho tsy maintsy ho eto taorian'ny firodanan'ny fitondran'i Maumoon, 8 taona tatỳ aoriana. Tsy tokony ho tonga amin'izao fetra izao ny firenena kely manana fihariankarena sy loharanon-karena betsaka tsy misy fandrahonana mivantana amin'ny filaminana sy ny firindran'ny fiarahamonina iraisana. Mahamenatra fa nametraka izao singa tsy voafehy ao anatin'ny fiarahamonina izao isika fa tsy fanjakana tsara tantana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/08/76305/
 nanambara ny firenena ho latsaka an-katerena 30 andro: http://maldivesindependent.com/politics/live-blog-maldives-declares-state-of-emergency-for-30-days-119339
 fihetsiketsehana goavana ao an-drenivohitra antsoina hoe : https://en.wikipedia.org/wiki/Maldivian_Democratic_Party
 FBI no nanohitra ny fanadihadian'ny mpanao famotorona hafa ary nilaza: http://www.dailymirror.lk/93451/fbi-says-no-bomb-in-maldives-president-boat-blast
 Nogadrain'ny : http://www.aljazeera.com/news/2015/10/maldives-arrests-vice-president-assassination-bid-151024085428419.html